Hafatr’Andriamanitra manokana ho an’ny ankehitriny
"Efa ho lasa ny alina, ka efa mby akaiky kokoa ny andro, koa aoka hariantsika ny asan'ny maizina ka hitafiantsika ny fiadian'ny mazava."- Rôm. 13:12.
Tokana ihany ny tokony ho tanjontsika amin'izao andro izao, dia ny hampiasa ireo fitaovana rehetra nomen'Andriamanitra mba hambolena ny fahamarinana ao am-pon'ny olona. Manana adidy ny Kristianina tsirairay hanao izay fara-heriny sy fahaizany hanapariahana ny fahalalana ny fahamarinana hatrany ivelany. — FCE, t. 201.
Efa niandry ela Andriamanitra, ary mbola miandry hatrany ireo izay Azy tamin'ny alalan'ny Famoronana sy ny Fanavotana Izy. Miandry azy ireo hihaino ny feony sy hankatô Azy toy ny zanaka tia sy feno fileferana Izy, izay manam-paniriana ny ho eo anilany sy hitondra eo aminy ny fahazavan'ny tavany. Tsy maintsy mitory ny hafatry ny anjely fahatelo amin'izao tontolo izao isika, mampitandrina azy ireo mba tsy hiankohoka amin'ny bibidia sy ny sariny, ary mitaona azy ireo hamonjy ny laharan'ireo "izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesôsy." Tsy nambaran'Andriamanitra antsika ny fotoana tsy ilana intsony ny fitoriana izany hafatra izany, na ny fotoana hifaranan'ny androm-pahasoavana. Adidintsika ny miambina sy ny miasa ary ny miandry, ny milofo tsy an-kijanona ho an'ireo fanahy izay efa ho faty.
Ankehitriny no fotoana hanaovana izany. Efa antomotra ny faran'ny zavatra rehetra. Miasa ny Fanahin'ny Tompo, mametraka ny fahamarinana avy ao amin'ny Soratra Masina ho toy ny tombo-kavatsa eo amin'ny fanahy. Amin'izay, ireo milaza ny tenany ho mpanara-dia an'i Kristy dia hanana fahamasinana sy fifaliana masina azony zaraina amin'ny hafa.
Mila fijoroana ho vavolombelona mandresy lahatra sy mahery vaika kokoa isika momba ny herin'ny fahamarinana, dia ny fiainana feno fahamasinana ananan'ireo izay milaza fa mino izany.
(...) Miatrika fotoana manan-danja lehibe izao tontolo izao; manapa-kevitra momba izay ho anjarany mandrakizay mantsy ny fanahy tsirairay. Miasa hatrany i Satana sy ny anjeliny, mamolavola tetik'ady hanafoanana ny lalàn'Andriamanitra, mba hamatorana ny fanahin'ny olona ho andevon'ny ota. Matevina tokoa ny haizina mandrakotra ny tany, saingy tsy misy na inona na inona kosa tokony hampatahotra izay manaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetren-tena. — RH, 9 Oktôbra 1894.